आन्दोलनमा उत्रने चिकित्सकलाई कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी ! - आन्दोलनमा उत्रने चिकित्सकलाई कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी !
आन्दोलनमा उत्रने चिकित्सकलाई कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३१ असार, 07:39:48 AM
काठमाडौं । सरकारले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सेवा अवरुद्ध नगर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा प्रवाह रोकिएमा अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानुन र चिकित्सक आचारसंहिता बमोजिम कारबाही गर्ने समेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका सरकारी कदममा सहयोग गर्न पनि आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकार अनशनतरत डा। गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दामा गम्भिर रहको भन्दै सरकारलाई सहयोग गर्न समेत केसीलाई आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले विचाराधीन विधेयकलाई आवश्यक छलफल गरी निचोडमा र्पुयाउन सरकार तयार रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा अनशन आवश्यक नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयक ०७२ मा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलले दिएको सिफारिसकै आधारमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
२०७५, ३१ असार, 07:39:48 AM